China adds voice to calls for lifting sanctions on Zimbabwe - NewZimbabwe.com China adds voice to calls for lifting sanctions on Zimbabwe - NewZimbabwe.com
Wang, who is also a state councillor, made the remarks during a joint press conference with Zimbabwe’s Foreign Affairs and International Trade Minister Sibusiso Moyo in Harare.
The unilateral sanctions imposed on Zimbabwe by some countries and institutions have no basis in terms of international law and infringed on Zimbabwe’s legitimate development rights and interests, Wang said.
This year marks the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and Zimbabwe, and the two sides should take this as an opportunity to further carry forward the tradition of friendly mutual trust and mutual support between the two countries, Wang said.
Over the past four decades the two countries have always understood, respected, supported and trusted each other, becoming an example of China-Africa cooperation and South-South cooperation, Wang continued, adding that China is pleased to see that China-Zimbabwe relations have been upgraded to a comprehensive strategic partnership of cooperation.
He said Zimbabwe is willing to learn from China’s experience in economic development and governance, speed up the high-quality joint construction of the Belt and Road, implement cooperation projects under the framework of the Forum on China-Africa Cooperation, strengthen communication and cooperation on international affairs, and jointly uphold multilateralism.